Wonderland တစ်ခရီးစဉ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်ခရီးသွားဧည့် လတ်ဗီးယား , ကျိန်းသေဒေသခံအစားအစာနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရအကြံပြုခဲ့သည်။ များစွာသောအရိုအသေထဲမှာကြောင့်ဦးတည်ရာကိုနိုင်ငံ၏တည်နေရာ, ဥရောပဆင်တူပါသည်။ ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများနှင့်အတူရပ်ကွက်အတွင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည် စတိုးနီးယား , လစ်သူ, ဘီလာရုစ်, ရုရှား, လတ်ဗီးယားရဲ့အမျိုးသားအစားအစာအဲဒီနိုင်ငံတွေမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတို့အားအလားတူဟင်းလျာများ, ပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။
အံအမျိုးသားရေးအစားအစာ - ဟင်းလျာများ
အစားအစာလတ်ဗီးယားကိုယ်စားပြုသောအစားအသောက်, ထုတ်ကုန််နှစ်ဦးစလုံးပုံမှန်အတိုင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဤနိုင်ငံတွင်လူကြိုက်များအဲဒီ options ဟင်းလျာများစာရင်းပြုစုနိုင်သည်
အသား - ဝက်သားနှင့်ကြက်အတှကျအသုံးပွုသော။ အမဲသားကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးအပြောင်ဒီဂရီမှဖြစ်ပါတယ်။ နီးပါးလတ်ဗီးယား၌ရှိသောအိမ်သူအိမ်သား jellied ဝက်သား, ဘုံနှင့်အနက်ရောင် pudding ကဲ့သို့သောအသားဟင်းပြင်ကြလော့
Latvian နီးပါးတိုင်းမုန့်ညက်နှင့်အတူမုန့်ကိုအလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြသည်ကြောင့်မျိုးပေါင်းဤမျှလောက်များစွာသောမျိုးစုံအတွက်ကိုယ်စားပြုနေသည်နှင့်၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောအရသာလူသိများသည်,
ပင်လယ်ကိုရန်၎င်း၏နီးကပ်မှကျေးဇူးတင်စကား, တိုင်းပြည်အတွက်အလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏချက်ပြုတ်ပင်လယ်စာ။ mackerel, ကော့, herring, flounder နှင့်ရေချို - - ပိုက်, ငါးကြင်း, bream, ပုံမှန်အတိုင်းအဏ္ဏဝါငါးအဖြစ် Apply ။ ခရီးသွားဧည့်ပိုင်းခြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာချက်ပြုတ်သည့်ဆော်လမွန်ငါး, မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ creamy ငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်သောနို့ရည်ချက်ပြုတ်ငါးကဲ့သို့တစ်ပန်းကန်ထွက်ပြန့်နှံ့။ ဥပမာအားဖြင့်, ကော့ ( "Zivju pudinsh") သို့မဟုတ် herring ( "Sylt pudinsh") မှလူကြိုက်များသောငါး casseroles ။
လတ်ဗီးယား၏အမျိုးသားရေးအစားအစာထဲမှာမုန့်ဖုတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်, အာလူး, သူတို့ Sklandu Rausch ဟုခေါ်ကြသည်, ယိုနှင့်ဘိန်းမျိုးစေ့များ, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, Donut, မုန့်တွေ, cookies, Gingerbread, cookies တွေကိုနှင့်အတူ scones - ဒီနေရာတွင်ဝက်ပေါင်ခြောက်, ပြောင်းဖူးအမဲသား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူကျပ်အဆိုပါ pastry မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဘေကွန်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာ Bun တစ်ဦးရေစာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးသင်တန်း, သူငယ်တော်ဖွားမြင်၏အမဖြစ်မနေ attribute ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်;
ချိုချဉ်, ဒါမှမဟုတ်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အချဉ်: Latvian သုံးအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်သည့်, sauerkraut ကိုအလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဘုံဂေါ်ဖီထုပ် - ဂျာမန်အစားအစာကနေချေးခဲ့ကွောငျးတစ်ပန်းကန်။
အတူတကွဥရောပနိုင်ငံများတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သည့်ရိုးရာအစားအစာ, နှင့်တကွ, အံအစားအစာမှသာဤတိုင်းပြည်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ရာထိုကဲ့သို့သောဟင်းလျာများ, ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့တွင်စာရင်းသွင်းခံရနိုင်သည်
buberte - ကြာပွတ်ပရိုတိန်းနှင့်အတူ semolina;
Janie ဒိန်ခဲ - မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်ဆင်းပေးအပ်ဟောင်းစာရွက်သုံးပြီး၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်။ ဒါဟာအနီးကပ်စိန့်ဂျွန်ရဲ့နေ့လို့ခေါ်တဲ့အံရုံးပိတ်ရက်မှ related လျက်ရှိ၏
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးပန်းကန်တစ်မီးခိုးရောင်ပဲဖြစ်ပါသည် - ကအားလပ်ရက်နှင့်အတူခရစ္စမတ်နှင့် Latvian တွဲဖက်အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ ဒါဟာအထူးနိမိတ်လက္ခဏာကိုကပါဝငျ - ပဲစေ့တွေဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းငိုမရ, ဒါကြောင့်, မျက်ရည်ကျတဲ့သင်္ကေတထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်, ကတတ်နိုင်သမျှစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကြော်ဘေကွန်နှင့်ကြက်သွန်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့် တွဲဖက်. သိ. လူကြိုက်များဂျ;
အချဉ်မုန့်နှင့်အတူဟင်းချို - skaba Putra, ကမုယောစပါး, ရေသို့မဟုတ် buttermilk ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပန်းကန်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည် 6-12 နာရီ Pre-အအေးကြောင့်၎င်း, ပြုလုပ်, တစ်လန်းဆန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး herring နှင့်မုန့်နှင့်ထောပတ်နှင့် တွဲဖက်. စားသုံးချဉ်မုန့်, ဟင်းချို add;
ကျယ်ပြန့်ကဒီပန်းကန်ထိုကဲ့သို့သောဝက်အူချောင်းအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်အရာ "တောင်သူလယ်သမားများ '' နံနက်စာ 'အဖြစ်ပင်လတ်ဗီးယားအပြင်ဘက်ကိုမသိ, ဝက်သားခါးကို, အာလူးပြုတ်, ရှိသမျှရောနှောသောက်သည်ပြီးတော့ဒယ်အိုးထဲမှာဖုတ်, ရိုက်နှက်ကြက်ဥနှင့်နို့တစ်ဦးအရောအနှောသွန်းလောင်းလေ၏။
လတ်ဗီးယားအတွက်ဘုံဒိန်ချဉ်, kefir, whey ပါဝင်သည်ထားတဲ့နို့ထွက်အချိုရည်။ ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်အချဉ် cranberry သီးဖျော်ရည်ကို add ထားတဲ့ပဲစေ့တွေဟာသို့မဟုတ် oatmeal - ဒါဟာဒါခေါ် putelsy ကြိုးစားရန်အကြံပြုသည်။ မေပယ်နှင့်ဘုစပတ်သစ်သားအဖြစ်သဘာဝအနေဖြင့်ရရှိသောလူကြိုက်များထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောဖျော်ရည်။ နွေရာသီအတွက်သင်ရိုးရာမုန့် kvass အမြင်ကြည်လင်စေရန်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လတ်ဗီးယား ဂုဏ်အသရေလည်းမရှိ, က၎င်း၏ဘီယာအဘို့အကျော်ကြားသည်နှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်များ၏ရှေးဟောင်းထုံးတမ်းစဉ်လာကိုလေးစားဖို့, များစွာသောဘီယာမုယောစပါးအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးရီဂါက Black ဗာလစံတစ်ခုဖြစ်သည်အရက်အချိုရည်များအနက်တစ်ခုကိုမှန်ကန်စွာဒီတိုင်းပြည်၏အမာခံများဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ဒါဟာပိတ်ပင်စည်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်နှင့်ဗော့ဒ်ကာနှင့်အတူရောနှော 24 ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအစိတ်အပိုင်းပါဝင်ပါသည်။
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား - ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဂရိနဲ့ဆိုက်ပရပ်စ် - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
အယ်လ်ဘေးနီးယား - ဟိုတယ်
Rimming - anilingus လုပ်ဖို့ဘယ်လို rimming များအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်ဟန်အနေအထား
သင်၏အသက်တာကိုရိုးရှင်းပါလိမ့်မယ် 10 ဘဝကိုဟက်ကာ
Milavitsa ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စုဆောင်းခြင်း